Ogaden News Agency (ONA) – Kulamadi ka dhacay caasimada 2aad ee UK Birmingham
Kulamadi ka dhacay caasimada 2aad ee UK Birmingham
Muuqal kamid ah shirkii Xalay hoos linkigan ka daawo 25 sawir muqaladi kale
Waxaa magaalada Birmingham shalay (15/09/2012) ka dhacay kulamo waaweyn oo hlakaas ka bilowday Duhurkii kuwaas oo kakala dhacay laba goobood waxayna socdeen illaa 11 Habeenimo.
Shirarkan ayaa waxa ka soo qeyb galay madax sare oo kamid ah gudiga fulinta Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya iyo masuliyiin kale oo kamid ah Jabhada ONLF. Waxaa Madaxda kamid aha Cabdiraxmaan Mahdi hoggaanka Arrimaha Dibada ONLF iyo Xaaji Maxamed Cabdi Yasiin oo ah Hoggaanka Arrimaha Abaabulka Iyo bulshada JWXO.
Sidoo kale waxaa kulankan kasoo qeyb galay xubno kamid ah Jaaliyadaha UK oo kakala yimid Manchester, Leeds, London iyo aaga midlandska sidoo kale jaaliyada loo martida ahaa ee magaalada Birmingham. Shirkan oo la odhan karo waxuu ahaa shirarki ugu qiimiga badnaa ee ka dhaca magaalada Birmingham ayaa hal maalin gudaheed waxaa lagu kulmay dhowr goobood oo looga arrinsaday howlaha halganka iyo isbadalada siyaasi ee ka socda caalamka gaar ahaan geeska Afrika.
Kulanki hore ayaa ahaa shir u furan dhamaan shacabweynaha waxaana kasoo qeyb galay boqolaal qof oo aad u jibaysnaa iyaga oo dhageystay warbixino ay masuliyiinta jabhadu ay ka bixinayeen xaaladaha shacabka Ogadeniya iyo dabaysha siyaasadeed ee ka aloosan geeska Afrika.
Cabdi raxmaan Mahdi oo ah Hoggaanka arrimaha dibada ahna Masuulka Hoggaaminaya wada xaajoodka Ururka ONLF iyo Gumeysiga Ethiopia ayaa waxa halkaas uu ka bixiyay warbixino uu shacabka kaso qaybgalay kulamadan ugaga waramay waxa uu ku dhisanyahay wada hadalka Ogadeniya iyo Gumeysiga Ethiopia. Masuulka ayaa sheegay in aysan jirin wax xabad joojin ah. Daggaalki Ethiopia iyo ONLF u dhaxeeyay waa halkiisi walibana tabihi cadowga aynu ula daggaalamaynay waa sii xoojinayna. Gudoonka ayaa sheegay in loo baahanyahay in halgankeena aan xooga saarno. Ethiopia waxa aynu hada ku heshiinay kaliya inaynu wada hadalno, kadib markii Ethiopia ay soo buuxisay dhamaanba qodobadi ku xidhnaa wadahadalka ee xeerka Ururka ONLF.
Xaaji Maxamed Cabdi Yasiin Diirane oo ah Hoggaanka Arrimaha Abaabulka iyo Bulshada ayaa isna halkaas kasoo jeediyay hadalo taarikhi ah. Hoggaanka ayaa sheegay in halganka JWXO hormuudka u tahay uu yahay kii qori isu dhiibka ahaa ee halgamadi ka horeyay soo gaadhsiyeen. inana maanta waa inaan dhameys tirnaa oo xoriyada aan gaadhsina ummadeena. Ururka ONLF kama uu tanaasuli doono xoriyada shacabka Ogadeniya kolay noqotao hal taako oo dhulkaas kamid ah kama aan tagi doono ayuu yiri hoggaanka Arrimaha Bulshada JWXO.
Waxaa aad looga hadlay oo su aalo iyo doodo badan laga soo jeediyay kulan kan damaca gumeysiga ee uu rabo in bulshada ku kala qeybiyo. Shacabka kasoo qeyb galay ayaa ku adkeeyay madaxda ururka in aan marna loo dabcin gumeysiga. shacabka Ogadneiya waa hal ummad waxayna u daggaalamayaan hal u jeedo oo ah in laga xoroobo Gumeysiga Ethiopia.
Kulankan ayaa waxaa hoosta looga xariiqay in kor loo qaado wacyiga bulshada ee ku aadan gumeysiga gaar ahaan sidii looga hortagi lahaa
Aaladaha gumeysiga ee dadka qabiilka lagu abaabulayo. gumeysiga ayaa isku dayi doona innuu shacabka ku abaabulo qabiil. Sidaas awgeed waa in laga hortagaa wax kasta oo qabiil ku saleysan.
Sidii Looga hortagi lahaa Barobagaandada beenta ah ee gumeysigu ku sheegayo in horumar ka hirgalay wadanka Ogadeniya. Gumeysiga ayaa horumar aan ka jirin gudaha Ogadeniya iskudayay in shacabka ku kasbado been aan jirin. Waxaa xaqiiq jirta ah in qorshihii Dhismayaasha Biyo xidheenka goday ee uu xayle selasie dajiyay illa waqtigan xataa la hir galin si buuxda. Wadada cad ee isku xidha Harar illaa Goday oo ah wadada kaliya ee marta Ogadeniyana aheyd qorshe Mangistu hailemarium dajiyay in laami laga dhiggo si ciidamada Ethiopia isaga gooshaan iyana illaa hadda la dhameys tirin. gumeysigu marka qorshayaashaas gumeysi ee loogu dan leeyayahay isku xidhka ciidanka ayuu ka fuliya Ogadeniya oo waliba wax badan uga hirgalin illaa waqtigan. taas horu mar maahan. Waa in bulshada iyo caalamkaba lagu baraarujiya dacamacaas beenta ku saleysan ee mala awaalka ah.
Sidoo kale waxaa shirkan kasoo baxay qodobo kale oo kor loogu qaadayo halganka oo la xidhiidha dhinaca Saxaafada, isku xidhka bulshada Dibada iyo Halganka Gudaha, taakulayna Qaxootiga Ogadeniya iyo qodobo kale oo muhiim ah.
Shirkan waxaa kale oo hambalyo loogu diray wariyaasha Ree Sweden ee madax banaanidooda helay. Waxaana halkaas lagu sheegay in qofkasta oo halganka dhibaato usoo gaadho khaasatan dadka ajanabiga ah lasiinayo aqoonsi gooni ah oo aan waligood la ilaawi doonin. Iyaga oo buugaagta halganka dahabiga ah lagu xusayo taarikhdooda iyo niyadooda wanaagsan.
Waxaa shirkan lagu canbaareyay gumeysiga Ethiopia dhibaatada uu soo gaadhsiyay suxufiyiintaas shaqadoodi watay.
Shirkan markii uu xidhmay ayaa hadana waxaa dib loo bilaabay shir kale oo ka dhacay xafiiska Jaaliyada Birmingham. Halkaas oo ururka haweenka iyo masuliyiinta iyo hawlwadeenkuba isugu yimaden. Waxaaana looga hadlay arrimo badan oo hoose oo khaas u ah howlaha ururka. waxaana loo soo jeediyay talooyin badan halgankeena Ogadeniya.
Hadalkii ugu xiiso badnaa ee lagasoo jeediyo kulamadi shalayto ayaa waxa soo jeediya Xaaji Maxamed Cabdi Yasiin (diirane) oo sheegay:
“In halgankan Ogadeniya si buuxda uu u bilaabay 60 meeyadi illaa waqtigaas laga soo bilaabo illaa eegana uu u taaganyahay sidii loo xoreyn lahaa dhulka Ogadeniya. Wali ima soo marin waqti aan daalay ama aan niyad xumaaday..maantaana uga jajabanahay halganka oo dareenkaygu ka xoog badanyahay. Maanta ayaan ugu niyad fiicanahay. waxaa suurto gal ah in aan xoriyada gaadho ama inaan nasiib u yeelan taas waa qadarta Allaah. Balse waxaan idiin sheegaya in Ogadeniya ay xoroobi doonto waayo calaamadihii xoriyada oo idil ayaa innoo muuqda.” sidaas waxaa yiri hoggaanka abaabulka iyo arrimaha bulshada JWXO xaaji diirane.
shacabka Ogadeniya ayaa waligood ka daalin inay xaq ku daggaalamaan. Halganka JWXO ayaa isna ah mid xaqii ku dagalamaya oo ku howlan sidii uu u dhameys tiri lahaa halganka.
25 sawir oo shirkan ah linkigan ka daawo Guji Halkan<<<>>>